Josoa - Howling Pixel
I Josoa na Josoe na Jôsoe dia ilay lehilahy nanampy an'i Mosesy (na Môizy) tamin'ny fitarihana ny Zanak'i Israely avy any Ejipta hankany amin'ny tany Kanana sady lasa mpitarika an'io vahoaka io taorian'ny nahafatesan'i Mosesy. Izy no ataon'ny lovantsofina jiosy sy kristiana ho nanoratra ny Bokin'i Josoa. Ny mpitsara Otniela no mandimby azy teo amin'ny fitarihana ny Israelita.
Nangataka amin'Andriamanitra ny hijanonan'ny masoandro i Josoa, nataon'i Gustave Doré.
Fifandimbiasan'ny mpitsaran'i Israely:
I Arona na Aharôna na Aarona dia olona resahina ao amin’ny Baiboly, indrindra ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Bokin’ny Eksodosy sy ny Levitikosy ary ny Nomery. Nanampy an’i Mosesy (na Môizy) tamin’ny fanafahana ny Zanak’i Israely tamin’ny fanadevozan’ny Egiptiana izy. Izy no mpisorombe voalohany ao amin’ny fivavahana jiosy sady mpanorina ny raharahan’ny mpisorona teo amin’ny Hebreo. Nanan-janaka an’i Nadaba sy i Abiho sy i Eleazara ary i Itamara tamin’i Eliseba (na Elizabeta) vadiny izy. I Arona dia zanak’i Amrama sy i Iokebeda, izany hoe taranak’i Levy. Rahalahin’i Mosesy sy i Miriama izy. Atao hoe אַהֲרֹן / Aharone io anarana io amin’ny teny hebreo fa Ἀαρών / Aarôn kosa amin’ny teny grika.
Nandray anjara tamin’ny fanatanterahana ny fahagagana nampanaovin’Andriamanitra azy sy i Mosesy teo anatrehan’ny Egiptiana izy. Isan’izany fahagagana izany ny niovan’ny tehiny ho menarana teo anatrehan’ny Farao. Satria i Mosesy tsy havanana tamin’ny fitenenana dia izy no nanampy azy amin’ny fitondrana teny raha nifampiresaka tamin’ny Farao izy ireo ny amin’ny tokony hanafahana ny Zanak’i Israely amin’ny fanandevozana. I Arona sy i Mosesy no namoaka ny Zanak’i Israely avy tao Egipta.Navelan’i Mosesy tamin’i Arona ny Zanak’i Israely tamin’ny niakarany tany an-tendrombohitra Sinay niaraka amin’i Josoa (na Jôsoe) mba haka ny vatofisaka nisy ny Didy Folo. Nefa i Arona, rehefa norahonan’ny vahoaka dia nanamboatra famantarana hita maso an’Andriamanitra, dia ny ombilahy kely volamena (Eks. 32.1-24) izay nahatezitra an’Andriamanitra taminy satria fanompoan-tsampy izany.
Ny Bokin’i Hagay na Bokin’i Akjea dia bokim-paminaniana ao amin’ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly kristiana. Isan’reo atao hoe “mpaminany madinika” i Hagay na Akjea.
Ny boky dia fitambarana faminaniana efatra izay ampitain’i Hagay amin’i Zorobabela, governoran’ny faritanin’i Jodea, sy amin’i Josoa mpisorom-be mandritra ny fanamboarana ny Tempoly faharoa tao Jerosalema tamin’ny taonjato faha-6 tal. J.K. Ny mpaminany Hagay dia isan’ireo izay namelona ny fahatongavan-tsain’ireo Jiosy nantsoina taorian’ny Fahababoana mba hanamboatra indray ny Tempoly ao Jerosalema tamin’ny taona 516 tal. J.K. Ao amin’ireo faminaniana ireo, i Hagay dia mamboraka ny faniriany hahita ny hahavitan’ny Tempoly haingana.
Ny Bokin'i Josoa na Bokin'i Jôsoe dia boky ao amin'ny Testamenta Taloha ao amin'ny Baiboly sy ao amin'ny boky masin'ny Jiosy (Tanakh). Mitantara ny nahazoan'ny Zanak'i Israely ny tany nampanantenain'Andriamanitra ny razambeny, dia i Kanana, ny Bokin'i Josoa. Maneho ny tsy fivadihan'Andriamanitra amin'ny fampanantenana nataony io boky io. Asehony koa anefa fa izay mivadika amin'Andriamanitra dia ho resy. Amin'ny teny fohy dia maneho ny fitondrana sy ny famonjen'Andriamanitra ny olony ilay boky.
Ny Bokin'i Josoa dia isan'ireo atao hoe bokim-pitantarana na boky ara-tantara ao amin'ny Baiboly kristiana, fa bokin'ny mpaminany na bokim-paminaniana (hebreo: Nevi'im) kosa izy ao amin'ny Tanakh, izay manasokajy azy ho isan'ireo "mpaminany taloha". Tokony ho tany an-tenantenan'ny taonjato faha-10 tal. J.K. no nanoratana ny ankabeazan'ny lahatsoratra hita ao amin'ny boky.
Ny Bokin'ny Mpitsara dia boky ao amin'ny Testamenta Taloha ao amin'ny Baiboly sady ao amin'ny boky masin'ny Jiosy, dia ny Tanakh. Mitantara ny zavatra malaza nataon'ireo mpitsara voatendrin'Andriamanitra hitondra sy hanafaka ny Zanak'i Israely tao amin'ny tany Kanana taorian'ny nahafatesan'i Josoa io boky io. Asehony ihany koa ny fiaimpiainan'ireo mpitsara ireo sy ny fangejan'ny firenena hafa ny Zanak'i Israely noho ny fialany an'Andriamanitra sy ny fiverenany aminy indray ka mahatonga azy ireo hahazo fanafahana. Isan'ireo atao hoe bokin'ny mpaminany ny Bokin'ny Mpitsara ao amin'ny Tanakh, fa voasokajy ho bokim-pitantarana na boky ara-tantara kosa izy ao amin'ny Baiboly kristiana.
Ny Hebreo na Hebrio dia vondrom-poko semitika izay nifindra avy any Mesopotamia nankany Palestina tamin’ny taonarivo faharoa tal. J.K. Izy ireo no heverina fa razamben'ny Jiosy ankehitriny.
Avy any Kanana ka nankany Egipta ny ampahany amin’ireo Hebreo, dia ireo taranak’i Jakoba, atao hoe Israelita na Zanak’i Israely, ka lasa andevon’ny Egiptiana. Rehefa afaka tamin’ny fanandevozana izy ireo teo ambany fitarihan’i Mosesy (na Moizy) dia nivezivezy tany an-tany efitr’i Sinay hankany Kanana indray. I Josoa (na Josoe) no nandimby an’i Mosesy alohan’ny hanafihany sy honenan’ireo Hebreo tao amin’ny tany Kanana atao hoe koa Palestina.
I Ibzana na Ibtsàna dia mpitsara tao Israely. Iḇṣān (אִבְצָן‎) no fiantsoana azy amin'ny teny hebreo. Ny teny grika manao azy hoe Ἀβαισσάνn / Abaissanê fa ny teny latina kosa Abesan. I Betlehema any Galilea no fiaviany, araka ny Bokin'i Josoa (Jos. 19.10-15). Nandimby an'i Jefta izy ka nitsara nandritra ny fito taona, araka ny Bokin'ny Mpitsara (Mpit. 12.18-10). I Elona no nandimby azy.
I Jeriko na Jerikao dia tanàna miorina eo andrefan’ny ony Jordana ao avaratra atsinanan’i Jerosalema, akaikin’ny tendrony avaratry ny Ranomasina Maty, ao amin’ny lohasahan’i Jordana. Amin’ny teny hebreo dia יריחו / Yerīḥo fa amin’ny teny grika kosa dia Iεριχώ / Ierikhô. Iericho no fiantsoana azy amin’ny teny latina.
Ny Nevi'im na Nebi'im ("mpaminany") dia ilazàna ireo boky izay mamorona ny fizaràna faharoa ao amin’ny Baiboly hebreo (atao hoe Tanakh) manomboka eo amin’ny Bokin’i Josoa ka miafara amin’ny Bokin’i Malakia. Ny fizaràna atao hoe Torah no eo alohany fa ny fizaràna atao hoe Ketuvim koasa no ao aoriany.